Sida loo soo dhoofiyo Excel qodobbada AutoCAD - Geofumadas
U sheeg inaad haysato liis dhibcood oo la qabsaday GPS, ama UTM isku-duwayaasha ee Excel-ka ah waxaanan dooneynaa inaan ku sawirno AutoCAD.
Marka laga hadlayo isticmaalaha Microstation, waxaan hore u sharxay ee boostadan, oo laga soo dhoofiyo faylka .cvs, iyada oo lagu darayo qodobo dheeraad ah si ay uga dhigaan mid xiiso leh.
Si dhoofinta laga bilaabo dwg ilaa sare arag boostan.
1. Diyaarso qaabka isku-duwidda
Waayo, AutoCAD, inkastoo ay ka badan tahay wax ku ool ah si ay u sameeyaan leh amiiradaha jir versions of Softdesk8, ama CivilCAD arki hab qalloocan of sida loo sameeyo iyagoon maciinsan wax carrab la'aan ah ama codsiyada kale.
Kuwani waa isku-duwayaasha aad leedahay Excel-ka, sababtoo ah ujeedadu waa in ay u gudbiso habka qaabka loo yaqaan "autoCAD", kaas oo ah:
x isuduwaha, jimicsiga, isku duwo
Waa hagaag, sidaan ku sameyn karno, waxaan ku sameynaa falanqayntan soo socda, qaybta soo socota waxaan qorneynaa qaaciddada
= QAABKA (A2, »,», B2)
Waxa aan sameyneyno waa nuqulida unugyada A2, ka dibna jumlad, ka dibna unug B2. Waxaan soo galeynaa oo nuquleynaa qaaciddada. Haddii aan leenahay isku-duwo ah z, isku mid, ka dib B2 waxaan samayneynaa kalasim kale oo qor C2.
2. Kaabi duwaha
Tani waa sida aan u ahaa.
Xulo dhamaan unugyada kuyeelka C, ka dibna nuqulka qoraalka (Ctrl + C)
3 Ku sawir dhibcaha ku jira AutoCAD
Hadda waxaan ku dhignaa AutoCAD amarka Barta, (Sawirka / dhibicda / dhibicda badan)
Hadaad ku dhejisid waxa aad haysatid sheyga (Ctrl + V) khadka taliska
Iyo diyaar, waxaa jira dhibco aad
Haddii aanad ku arkin dhibcooyinka aad u fiican, qaabka (qaabka / qaabka qaabka)
Maxaad ... miyaad taqaanaa hab kale oo loo sameeyo?
Si aad u soo jiidatid qulqulatada, waxaad isticmaashaa foon-jiidka meeshii amarka, oo ay ku dhici doonto.
Thanks to macluumaadka jordi, waxaa jira macro si ay u sameeyaan ficil ahaan ... ku akhri faallooyinka ee this post.
Post Previous«Previous Warka ugu fiican ee ku saabsan SQL Server Express
Post Next Maalinta mahadnaqa ee faraxsan ayaa la sameeyay onlineNext »
204 Jawaab in "Sida loo soo dhoofiyo Excel qodobbada" AutoCAD "
Cidda ay danaynayso Waxaan u baahanahay caawimaad si aan ugu gudbo isku-duwaha heer sare ee autocad, waxaan u sameeyaa si fiican prosedimiento oo dhan (waxaan u maleynayaa sidaas) laakiin qodobbada ilama muuqdaan. Waxaan ku soo qaatay casharo badan oo ku saabsan sida loo sameeyo, waxaan u raacaa xarafka laakiin aakhirka waxba kama taro. PS: Waxaan haystaa autocad 2012.
ka isagu wuxuu leeyahay:
sangat membantu saya om ... .. ku saabsan sini yaa om ...
Salaan Habeen wanagsan Fadlan i caawi. Sideen ugu tagaa isku-duwayaasha Autocad oo leh faahfaahinta Excel. Tusaale magaca 'Point'. (P1, P2,… iwm). Salaan iyo mahad celin hore
barnaamij aad u fiican
Waa inaan aragnay kiiska. Anigu ma fahmi karo
Waad mahadsan tihiin. Anigu waxaan su'aal qabaa, waxay ii gudbiyeen khariidad ballaadhan oo ku saabsan autocad, xilliga ay soo gelayaan qodobo dhowr ah oo ay ku soo saaraan khadadka dheeraadka ah ee diyaaradda iyada oo la adeegsanayo habka wax dhigista, waxay i siinaysaa farqi ballaaran oo khadka ka soo baxa diyaaradda. Maxaan sameyn karaa? Waan u mahadcelin doonaa wixii caawinaad ah.
Mawduucyada kale ee goobta waxaa jira noocyo kale oo ah qalab loogu talogalay waxaad raadineyso.
Isku day inaad ku raadiso ereyga "Excel" goobta.
Dênis isagu wuxuu leeyahay:
Segui Seu roteiro ma AutoCad 2017, porém sem axito na adição wuxuu bixiyaa liiska iskudhacyada, kaliya hal unug waqti.
Suurtagal ma tahay in kor loo qaado warqad loogu talagalay liiska isuduwaha liiska? oo ay ka mid yihiin ama nome ha sameeyo ponto. Fadlan
Ku dhufo amarrada dhibcaha, ka dibna ku dheji liistada oo geli.
Taasi waa inay kuu shaqeyso.
haddii kuwaasi ay yihiin xariiqa dhaadheer iyo dhaadheer, ugu habboon waa in aad ugu beddelatid isku-duwayaasha UTM. Hagaag waxay umuuqataa inay kujiraan heerar.
Anigu waxaan leeyahay isuduwayaashaas laakiin ma nuqulaynayo 2015-ga xannibaadda ah ee aan ku leeyahay fadlan
Waxaan fahamsanahay waxa aad rabto waa liiska x, y, z coordinates ka dibna u soo dhoofin leh CivilCAD ama Civil3D
Waa inaad aragtaa waxa uu baakidhka u egyahay.
Hlaa..Waxaan u baahanahay inaan sameeyo faa iido guud oo leh qaab qaabeedka qaabeynta Exel ama la wadaagida warqadda..my data waa heer leh heerka aan haysto z, iyo baaxada wadada
Gustavo Etchichury isagu wuxuu leeyahay:
AutoCad 2013, sida aad u sharaxeyso si aad u wanaagsan, laakiin markaad dheereyso liis isku dhaf ah oo ay ku kala sooceen qoddobooyin kaliya dhaji rikoorka koowaad.
Markaad daawaneyso liiska la diiday, waxay sheegaysaa: Amarka aan la aqoon oo wuxuu muujinayaa rikoorkii ugu horreeyay wuxuuna ku matalaa kormeeraha. Laakiin diiwaangelinta soo socota ee amarka aan la aqoon waxay muujineysaa qaybta jajab tobanlaha ee EAST, comma gooni goosadka bariga ee diiwaangelinta 2 °, comma kala sooca iyo Waqooyiga ee diiwaangelinta 2 °.
Sida muuqata qaybta jajab tobanlaha ee EAST waxaa lagu sifeeyaa diiwaanka soo socda. Waxaan sugayaa faallooyinka. Salaan
Si fiican uma aqrin. Waa inaad "ku dhejiso" xariijinta tallada, ha ku saarin shaashadda.
Juan Ruano isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsan tahay boostada aadka u xiiso badan, laakiin waxaan haystaa nuqul, markaan nuqul ka sameynaayo Autocad, halkii aan ku dhufan lahaa qodobada aan ku dhuftay miisaan sare, markaa waa inaan u mahadceliyaa
Nathaly Zeballos isagu wuxuu leeyahay:
Genius of Genius !!! kun ayaa mahad leh!
Waxaad ka soo dhoofi kartaa shtag, sharaxaad iyo wax kasta, laakiin aanad isticmaalin kaliya AutoCAD, waxaad isticmaali kartaa AutoCAD Civil3D ama barnaamij kasta oo leh awoodda GIS.
Haddii aad rabto inaad samayso kaliya oo leh AutoCAD ama kaliya leh Excel, waa inaad ku qortaa macro Excel ama Autolisp.
Norelkis Salazar isagu wuxuu leeyahay:
Si kale haddii loo dhigo, waa qasab in la isticmaalo macro. Iyo haddii aan ka dhoofo a txt.
Bari, woqooyi, cabir baa u galaa sidii doorsoomayaal x, y, z. Meelaha kale sida dhibicda iyo sharraxaadda ayaa ah astaamihii qoraalka la abuuri lahaa, kaas oo ku lug leh adeegsiga macro tayo leh.
Hal su'aal, haddii aan wax ka badan doorsoomayaasha Door Nidaamka kala duwan ama ayaan isticmaali karaa tusaale ahaan isla cordenadas dhidibka (East North), heerka, dhibic iyo sharaxaad.
boqol kun oo dhibcood, mahadsanid
Xasuusnow in AutoCAD ay u adeegsato jajabka oo ah kumanaan kala go ', sidaas ma dhihi kartid 80600,56; 890500,79
Waa inaad isticmaashaa barta loogu talagalay kala goynta jajab tobanlaha iyo comma ee kala goynta ee isku xirka 80600.56,890500.79
CIISE MELENDEZ isagu wuxuu leeyahay:
SHAQADA KASTAA WUXUU WELL MARKA MARKA UTM COORDINATU U SHAQEEYAA CADAALADA, AMA LAGU MAGAC YAHAY LAMBARKA AQOONSIGA: E 480600, N 890500. HADDII HADDII AY KARAAN E 480600,56; N 890500,79. DAAWADA AUTOCAD215; MA AHA IN AAD RABIGEYSAA INGIRIISKA; QODOBADA WAA: SIDEE AYUU U DALBANAYAA "QARSOODI" SHAQADA EXCEL EE HADII AUTOCAD2015 ay aragto in XUQUUQAHA UAE MUUQAALKA EXCEL uu leeyahay XUQUUQDA AADAMADA.
Hello. Waxaan haystaa saldhig nikon322, 5 ", oo leh asalka asalka ah iyo inaanan u soo gudbin karin xogta 2.5
ama rayid maxaan sameeyaa?
si aysan u joojin oo isku dayin in ay u hoggaansamaan liiska dheeraadka ah, woqooyi, bariga, heerka, code waxay u qaadaan qoraallada, laakiin ma soo dhoofin karo autocad 14. Tallaaba noocee ah ayaan raacayaa si aan u sameeyo markaa ka dibna ka soo baxo wareegyada heerka?
Waad ku mahadsan tahay fikradaada. Salaan
Hambalyo, Fernanda. Waxaa jira fursado badan.
1 Ka hubso qodobo dhowr ah, haddii kumanaanka astaamaha kala go'idda aan lagu sii habeyn.
2 Baadhitaan ku samee qaabeynta goobta shaqada, sababta oo ah aagga shaqadu kuma koobna faylka CAD oo haddii qodobbadaadu ka bataan xadidan amarka ayaa soo diraya qalad.
3 Haddii akhriska ka dib aadan helin xalka, noo soo dir faylka Excel si aan u eegno. tifaftire (arroba) geofumadas. Com
4 Si sawirku u noqdo mid firfircoon marka loo eego isbadelka xogta ku jirta Excel, waxaan soo jeedinayaa inaad isticmaasho Civil3D, oo hawlo sidan oo kale ah ku sameeya liistada tilmaamaha.
Hambalyo! Waxaan u baahanahay inaan ka dhaansado oo ku saabsan 10000, la isku X iyo Y, waxaan concatenate karo oo aan wax sidan oo kale inaan ka muujiyay: 1,0.52,1.78 ..., x-duwo kala duwan ii 1 iyo 25.! Su'aashu waa tan, waxaan ku xafidayaa faylka SCR, iyo marka aan rabo inaan ka furo amarka otocad, waxay ii sheegeysaa in feylka aan la aqoon! marka laga reebo awoodda inay soo jiidato, waxaan u baahanahay in mar kasta oo aan wax ka bedelo faafaahintayga Excel, waxaan sidoo kale wax ka bedelayaa sawirka autocad! waad ku mahadsan tahay wax badan
AYUDAAAAAA isagu wuxuu leeyahay:
HALKEE AYAA ISKU DIYAARIYO MAALINTOOYIN KA DHACAYA MACLUUMAADKA 2015 ?????????????????????
Mituky isagu wuxuu leeyahay:
Fiirsaneysa inay formula = concatenate ah ( "_ POINT", B1, ","; A1, ","; C1, "_-TEXT @0,0,0 5 0", D1) Cesar, baari sababta siiyey qalad iyo maamulo horumarinta wanaagsan . Khuseysaa gelin description dhibic. Waxaan horumariyo AutoCAD for Mac 2015 oo waa sida soo socota = concatenate (A4, B4, C4, D4, E4, F4, G4, H4).
A4 = _POINT (oo leh meel dhamaadka)
D4 = Isku duwid
F4 = Isku-duwid
G4 = _-TEXT @0,0,0 5 0 (la meel at bilowgii iyo dhammaadka) (tirada 5 ka dhigan tahay size qoraalka iyo hanuuninta 0 ah, haddii loo baahdo, ka beddeli kartaa)
Caanaha waxaa lagu sameeyaa unug I4 ama wax kasta oo aad rabto.
Waa inaad barnaamij ka sameysaa AutoLisp. AutoDesk Civil3D waxay sameyneysaa howlo adeegsi iyadoo la adeegsanaayo keydka macluumaadka ama xogta xml ee kujira mashruuc.
Waxaa suurtagal ah in la isku xiro miiska sare oo leh dhibcood ee AutoCAD, taas oo ah, waxaan gali karaa dhibcooyinka miiska sare, kuwan ayaa lagu muujin doonaa shaashadda AutoCAD iyo marka aan furo miiska sare iyo bedelida isku-duwid, sidoo kale bedelida jagadaada ee AutoCAD ???????
hi sida ay u socoto
By fursad waxaa suurtagal ah in link miis la isku mari inay AutoCAD, iyo marka dhibcood waa horeba ay jiraan, la furo miiska Excel iyo ka beddeli dhibic iyo in this ayaa sidoo kale bedeli doono booska ay ku AutoCAD?
Waxay ahayd mid deg deg ah in la dhigo dhibco 10,000 iyada oo loogu mahadcelinayo talooyinka salaanta saaxiibka
Haddii aad iigu soo dirto feylka Excel si aad u fasirto sida macluumaadkaaga loo qaabeeyey waxaan kuu sheegi karaa sida aad u sameyn karto.
Hiigsiga .. Ma ii sheegi kartaa sida loo gudbi karo xogta laga gooyey ama laga buuxiyey si aad u hesho autocad ... Thanks
salina isagu wuxuu leeyahay:
Haddii kaliya aan haysto xog cabbir (Z) sida sawir gacmeedka 'autocad' ee millasta faylka asphalt 'Waxaan heystaa darajo isugeyn ah oo go'ay dhidibka, markaa masaafada xNUMX mts xogta isla'eg ee darajada iyo goynta iyo hal dhinac oo dheeraad ah kuwa kale 3.50 mts-sida aan ku soo jiiday qeybtaas autocad iyada oo aan loo adeegsanin madasha. (URGENT)
WAA INAAD I CAAWIN KARTAAN MARKA LAGU SAMEEYO MARKA LOO SAMEEYO
JAIRO OROZCO isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsantihiin fiidiyowyada, waxay yihiin kuwo aad u faa'iido badan, waxay iga caawiyeen wax badan oo aan ku barto autocad. Ilaah wuu idin barakeeyey.
Dib u eeg arrinta arrinta cutubyada nidaamka. Codsigu wuxuu u baahan yahay in kumanaan kala soocida ay noqdaan comma, kala saarista jajab tobanle iyo kala goynta liistada comma.
Isku day isku-duwidda wareegga ah, si aad u aragto in ay ku xiran tahay meesha aad daneyneyso, ka dibna ku dar waxyaabo dheeri ah si aad u aragto waxa dhacaya.
Sidookale hadaad noo sheegi karto aaladda aad kahadleyso, waxaa jira dhowr waana laga yaabaa inaan kahadalno arintaan. Qaarkood waa inay diraan utm ilaa google dhulka, qaarna juqraafi ahaan ilaa google dhulka, noo sheeg waxa aad ka hadlaysid.
Salaan, feylka si loogu diro Google Earth waxaan sameeyay faylka, laakiin isku duwayaasha oo dhan waxay wataan xogta soo socota 180 ° 0'0.00 ″ N 74 ° 0'0.00 ″ Ama… .Ma fahmi karo waxa dhaca, sidoo kale ma muujinayo dhibcaha khariidadda (faylka ayaa la sameeyay lambarada iyo fiirsigana waxaa lagu arkay gudaha dhexdiisa) ... Waad ku mahadsan tahay haddii aad i caawin karto ...
Ma ogi, ma fahmi karo dhibaatadaada.
Waxay iigu muuqataa inaanad si fiican u dhigin malaayiin keli ah oo dhibcood u leh kala qaybsanaan tobanle
Subax wanaagsan, feylka loogu beddelayo isku-duwaha UTM illaa faylka Kmz ayaa dhaliya faylka laakiin ma muujineyso dhibcaha google iyo, ka sokow joogsiga faylka waxay i tusineysaa dhammaan qodobbada feylka isla xiriirinta isku mid ah. Marka laga hadlayo gudbinta juqraafi ahaan UTM ma aanan awoodin inaan isku soo jiito Acad maadaama sida muuqata faylka aan ku leeyahay aan la shaqeynaynin iskuduwayaasha saxda ah haddii aysan qaraabo aheyn oo xaddiga uu ka duwan yahay… Sideen u bedeli karaa? ... Xaqiiqdii anigu si aad ah uma liigto Acad. Waad ku mahadsan tahay waxaad i caawin karto. GEDL
Waxaan ula jeeday inaan dhaho jawaabihii "
Hello Jose Luis, waan ka xumahay in aan awooday inaan ku soo jawaabi karo waqtiga. Sida caadiga ah waxaa laga yaabaa inay faa'iido leedahay.
Waa inaad hubisaa in calaamada laga jaray ay ka horreyso amarka TEXT (-text) sidaa darteed waxay ku sii jeedaan qoraalada kujira khadka taliska.
Haddii aad sharaxdo waxaad samaynayso ama nagu nuqul ka mid ah waxa aad garaacid AutoCAD malaha waan ku caawin karnaa.
walaalkeed marka aan soo diro qaaciddada wuxuu igu tuuraa qalad xun oo dhacay
jose luis torres isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan isku dayay in uu u gudbiyo hal dhibic ka Excel in autocad, u suurtagashay in ay sameeyaan dhibic, laakiin aan karin qoraalka. Codso formula ah in la daabaco iyo amarka qoraalka waa awood, oo ay ku jiraan oo xuduudaheedu sida height warqad iyo xagasha wareeg, laakiin ma aha qoraalka ku jirta gacanta D1 la galiyo, dulqabo la biligleynaya sugaya qoraalka ka keyboard ah. Waxaan u mahad celineynaa wax caawimaad ah.
Aad u fiican! caawimaad qiimo leh, fadlan sii wad si aan u kordhin karno aqoonta la wadaagayo dhammaan ...
Wixii aad ka shaqeysid Jaime, template -kaan ma shaqeynayo.
Laakiin AutoDesk Civil 3D ayaa ka fiicnaan karta.
JAIME ROMERO isagu wuxuu leeyahay:
SIDEE AYAAD SAMAYNAYAA PASS COORDINATES AND CODES EXAMPLE ANDEN VIA (Ect)
DARWIN isagu wuxuu leeyahay:
Waxay iga caawisay wax badan, mahadsanid aad u badan
Kala shakiqo si aan u aragno sida laguu caawiyo
tonni isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u baahanahay inaan ogaado faahfaahin dheeraad ah laakiin la soco qoraal, mahadsanid
Dib-u-eegaan qaabeynta qaababka isbeddelka goboleed.
Xaqiiji in kala saarayaashii jajab tobanlaha ay yihiin dhibicda, kumanaan gooni gooni ah, jamacadda, iyo jajab tobanle.
carlos rene isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan adeegsaday barnaamijka xyztocad, laakiin waxaan ku galaa cilada soo socota «qalad markaan badalo xarig: 3213343 si aan labanlaabno, waxaan ku sameeyay tusaalaha aad soo dirto waxayna soo bandhigaysaa qalad la mid ah, horay ayaan u hubiyay keydka macluumaadka mana ahan mid soo noqnoqday xogta, waad awoodid Muuji waxa dhaca. mahadsanid
Ka dib marka la galo iskudhafka dhibic wuxuu diyaar u yahay in uu helo qoraalka sharraxaadda ee unugta D ee calaamadda @ ee qaababka aan haysanin waxqabad firfircoon.
@0,0,0 waxaa loo istcimaalaa in lagu doorto isku-duwaha ugu dambeeya ee isuduwaha oo loo adeegsado amarrada soo socda, kiiskan _-qoraalka., 5 waa joogga sare ee qoraalka iyo eber xagalka wareegga, xogta lagu beddeli karo baahiyahaaga.
Waxaa suurtagal ah in la caddeeyo in qaaciddada faalladayda hore ay ku jiri lahayd unug ka tirsan 1
Waxaan xiiseynayaa inaan soo galo isuduwaha leh cabbirka X, Y, Z, laakiin waxaan ka arki karaa faallo ku saabsan joojinta foomka
= KHATARTA ("_ POINT"; B1; ","; A1; ","; C1; "_-TEXT @0,0,0 5 0"; D1) mana fahmin ugu dambeeyay ee 'TEXT @0,0,0 5 0 "; DX »Taasi waxay tixraacday. way fiicnaan laheyd hadaad sameyso video oo aad kumbuyuutarka geyso hadaad sameyso waxaan jeclaan lahaa inaad iigu soo dirto emailkeyga bonanza.costa@yahoo.es
WAXYAABAHA UGU HORREEYA KOOXAHA DHAQAALAHA BADAN !!
Ogolow X, Y, Z
AUTOCAT ACCEPTS POINTS X, Y, ZO KALIYA ACCEPTS X, Y
Iyadoo ay ku jirto Xalka column B, Y xagga midabka A, Z ee tiirbalka C, sharraxadda ku xigta Qodobka D waxaa lagu dabaqayaa jumlada E si loo nuqulo loona dhajiyo khadka xargaha ee Autocad isla markaana ku guuleysto Goobta la Ogaaday.
Waxa laga yaabaa inay ku kala duwan yahiin waafaqsan nooca laakiin fekerkaas ayaa ah.
= XIRFADAHA («_ QODOBKA«; B1; »,»; A1; »,»; C1; »_-TEXT @0,0,0 5 0«; D1)
Ugu dambeyntii waxay ahayd dhibaato dhib yar, way socotay balse fogayd.
Waxay ahayd lagama maarmaan in la sameeyo wareeg ah mitirka 500 dhexroor, oo ku wareegsan isuduwid loo yaqaan, si loo arko inay jiraan khadadka.
Sidaa awgeed waxaan kugula talineynaa inaad soo jiitaan, ilaa xad.
Waxay u muuqataa in aanad awoodin inaad horey u sii wado.
Haddii aad taqaanno TeamViewer, kaalay oo igu soo dir farriin email ah:
Qaabkaas ayaa laga yaabaa inaan hubiyo waxa ku dhaca mashiinkaada meel fog.
Waxba ka baxsan, khadkaasi wuu socdaa
Wax ma ka baxaan ama ma aha?
Ma garanayo sababta aanan u heleynin garbaha iyo xuduudaha
Waa hagaag, waxaan u maleynayaa in ay sawirto, oo aad eegto xarig aan xad lahayn sababta oo ah bandhiggaagu waa ka fog yahay aagga.
Tijaabi xajmigaaga ka dib markaad fuliso amarka (isticmaalka qadka) si aad u ogaatid in dirista ay ku taala aagga.
feylkeyga wuxuu ku jiraa acad.dwt
qaabeynta gobolka waa mid fiican.
tijaabinta isla xariiqa xariiqda aan dhamaadka lahayn way soo baxdaa laakiin ma soo jiidasho maxaa yeelay markay dhaqaajineyso mause waxay sidoo kale dhaqaaqdaa iyo markaan gujinayo qayb kasta oo ka mid ah aagga shaqada waxay ku taal oo keliya goorta aan dhigayana qodobka ku xigana aniga ima soo jiido.
sida aan kuugu sheegayo tiro yar haddii aad i soo jiidato.
iyo iskuduwayadan tirada badan Marka aad koobiyo dhammaan isku-duwayaasha sida ku xusan waxaad ka sharaxday boggan, waxyaabaha soo socdaa waxay ka muuqdaan barta taliska:
Dib u soo celinta qaabka.
AutoCAD menu oo loo yaqaan "utility".
Talo: _line Sifee dhibicda koowaad:
Looma helin xariiq ama jajab si aad u sii wado.
Muuji qodobka koowaad: 304710,1713474
Cadee qodobka ku xiga ama [Soo noqo]: * Soo noqo *
Talo: * Soo noqosho *
Talo: _line Cadee dhibicda koowaad: 304710,1713474
Muuji qodobka xiga ama [Undo]:
Naqshad u dhiganta C: DOCUME ~ 1DiegoCONFIG ~ 1TempDrawing2_1_1_2921.sv $ ...
Tilmaamayso barta bilawga ah: 304710,1713474
Xadhiga xadka ee hadda jira waa 0.0000
Muuji qodobka xiga ama [Arc / Halfwidth / Length / Undo / Width]: 304718,1713482
Muuji qodobka xiga ama [Arc / Close / Halfwidth / Length / Undo / Width]: 304720,1713490
Muuji qodobka xiga ama [Arc / Close / Halfwidth / Length / Undo / Width]: 304722,1713494
Muuji qodobka xiga ama [Arc / Close / Halfwidth / Length / Undo / Width]: 304724,1713500
Muuji qodobka xiga ama [Arc / Close / Halfwidth / Length / Undo / Width]: 304726,1713511
Muuji qodobka xiga ama [Arc / Close / Halfwidth / Length / Undo / Width]: 304733,1713516
Muuji qodobka xiga ama [Arc / Close / Halfwidth / Length / Undo / Width]: 304735,1713517
Muuji qodobka xiga ama [Arc / Close / Halfwidth / Length / Undo / Width]: 304741,1713522
Muuji qodobka xiga ama [Arc / Close / Halfwidth / Length / Undo / Width]: 304739,1713524
Muuji qodobka xiga ama [Arc / Close / Halfwidth / Length / Undo / Width]: 304745,1713535
Muuji qodobka xiga ama [Arc / Close / Halfwidth / Length / Undo / Width]: 304747,1713537
Muuji qodobka xiga ama [Arc / Close / Halfwidth / Length / Undo / Width]: 304748,1713535
Muuji qodobka xiga ama [Arc / Close / Halfwidth / Length / Undo / Width]: 304749,1713520
Muuji qodobka xiga ama [Arc / Close / Halfwidth / Length / Undo / Width]: 304748,1713517
Muuji qodobka xiga ama [Arc / Close / Halfwidth / Length / Undo / Width]: 304752,1713510
Muuji qodobka xiga ama [Arc / Close / Halfwidth / Length / Undo / Width]: 304754,1713509
Muuji qodobka xiga ama [Arc / Close / Halfwidth / Length / Undo / Width]: 304752,1713503
Muuji qodobka xiga ama [Arc / Close / Halfwidth / Length / Undo / Width]: 304751,1713503
Muuji qodobka xiga ama [Arc / Close / Halfwidth / Length / Undo / Width]: 304739,1713501
Muuji qodobka xiga ama [Arc / Close / Halfwidth / Length / Undo / Width]: 304741,1713491
Muuji qodobka xiga ama [Arc / Close / Halfwidth / Length / Undo / Width]: 304742,1713490
Muuji qodobka xiga ama [Arc / Close / Halfwidth / Length / Undo / Width]: 304751,1713481
Muuji qodobka xiga ama [Arc / Close / Halfwidth / Length / Undo / Width]: 304755,1713477
Muuji qodobka xiga ama [Arc / Close / Halfwidth / Length / Undo / Width]: 304760,1713473
Muuji qodobka xiga ama [Arc / Close / Halfwidth / Length / Undo / Width]: 304710,1713474
Muuji qodobka xiga ama [Arc / Close / Halfwidth / Length / Undo / Width]:
Muuji qodobka xiga ama [Arc / Close / Halfwidth / Length / Undo / Width]: * Soo noqosho *
Suurtagalnimada kale waa in unugyada si qaldan loo fahmo, taas oo ah, in dhibic loo tixgeliyo inay tahay jaahwareer si loo kala saaro kumanaan.
Eeg in taas.
Waxaad iigu sheegeysaa in aad aqbasho isuduwaha 3,8, taas oo ah, tiro yar.
Ma garanayo sida feylkaaga dwgu yahay, laakiin waxa ay igu dhacdaa in ay noqon karto in uu leeyahay goob shaqo oo leh xuduud horay loo aasaasay oo iskudubarid ka baxsan ma aqbalo.
Isku day in aad sameysid nooc kale oo wax kale ah, ma aha dhibic laakiin xariiq.
oo fiiri haddii laynka la soo dhejiyo ama aad fariin fariin ah ka hesho inaadan kala duwaneyn.
Waxaan ula jeedaa marka aan dhowr UTM ku jiraan wadataa ee lambar 7 7 in xy iyo tusaale ahaan (304710,1713474) shaqeeyaan oo nuqul ka iyo paste baan ka heli line ah la koobi karayn i waydiinaya punto..pero ugu horeysay markii la isku tusaale ahaan 3,8 ama 12,4 shaqeeya halkaas haddii aan fadlan iga caawi marka aan fashilmay.
Cordenadas waa kuwan soo socda
Waxba kama soo baxaan, kaliya waa khadka aan xadidneyn oo weydiisanaya qodobka koowaad. Tani waxay soo baxeysaa markii aan la shaqeynayo dhowr dhibco oo leh isku-duwaha utm ee isugeynta '7' ee x iyo 7 ee y, Tusaalaha (01234567,9876543), laakiin markii aan la shaqeeyo isku-duwayaasha laba-lambar (12,32) Halkaas haddii aan sawirku helo, fadlan i caawi
Isku day inaad raacdo talaabooyinka sidaan sharaxay. Waxay noqon kartaa in dhibcuhu horeyba u jireen, laakiin waa inaad sameysaa illaa heerka Zoom si aad u aragto halka ay joogaan, ama beddesho qaabka si ay u muuqdaan.
Waa salaaman tahay, waxaan hayaa xog ku saabsan Excel oo isku mar ah. Waan koobi karaa oo waxaan ku dhajiyay 'autocad' dhibic ka dibna waxaan gacanta ku dhigay + v amarka laakiin waxba ima soo baxin
Yosilo Prieto Rico isagu wuxuu leeyahay:
Daabacaad wanaagsan. Taageero farsamo aad u fiican. Waxaan dhamaantiin ku ammaanay dhaqdhaqaaqyada caqli-galintaada oo kugu boorinaya inaad horay u socotid oo aad ugu gudbisid aqoonta bulshada. DARYEELKA BADAN
Habkani wuxuu ahaa mid waxtar leh oo dhakhso ah
fadhi isagu wuxuu leeyahay:
Isku kalsoonow, hab kale waa inaad nuqul ka sameysid ka dib markaad ku dhajisid qoraallada qoraalka ah, kuna rid xariiqda ugu horeysa ee amarka, oo ah midka loo yaqaan "polyline (pl)", "point", "blocks".
Trick waa in marka aad u kaydiso, u kaydso sida faylka .scr ah oo ka soo qaado autocad leh amarka script.
Faylka hal mar waxaad ku dhigi kartaa amarro dhowr ah oo isku dhafan, horayba u tagaa hal abuurka mid kasta.
Hadda oo aan xasuusto, way ka fiican tahay habkan haddii aad haysato xayiraad oo leh sifooyin iyo inaad u baahan tahay inaad si toos ah u soo qaadato, tusaale ahaan:
Waxaannu leenahay xayirad qaab-dhismeed ah waxaanan u baahannahay dabeecad si aan u muujino qoraalka.
1. Waxaan abuurnaa iskudhafka iyo qoraalka, waxaan ku biiraynaa iyaga oo waxaan abuureynaa xayirad leh xariiqda galinta bartamaha wareegga.
2. Waxaan abuurnaa faylka gawaarida qaab dhismeedka sidan oo kale:
3. Meesha 1 1 0 waa miisaanka X iyo Y siday u kala horreeyaan iyo lambarka ugu dambeeya ee wareegga. Waxyaabaha muhiimka ahi waa inay ka baxaan dhamaadka meel amar ah oo loogu talagalay in lagu celiyo.
4 Waxaan ku rarnaa feylka amarrada qoraalka oo waxaan lahaan doonnaa "dhibic dhib badan oo adag".
Waa wax walba oo ku saabsan ciyaarista amarrada.
stalin isagu wuxuu leeyahay:
Hello everybody, Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado sida loo gudbin karo xogta Excel ee AutoCad, laakiin, waxaan rabaa in xogtaas la beddelo in excel lagu badalo AUTOMATIC in AutoCad
MUXAS SHAQOOYIN KUSAABSAN WEEDO
JOSE DAVID isagu wuxuu leeyahay:
talooyin aad u fiican
Taasi waa dhab ahaan waxa boostada ay ku sharraxdo ku saabsan tahay. Haddii aad leedahay dhibco, waxaan u qaadaneynaa inaad leedahay x, y isku-duwayaal. Waxaan u qaadaneynaa inaad leedahay cabbiraad, oo ah isku-duwaha z.
Sidoo kale, u kala sooc saddexdaas si ay u soo geliyaan AutoCAD
Dioney isagu wuxuu leeyahay:
sida loo galiyo dhibcaha abscissa Excel iyo quotas oo keliya
si ay u qaataan autocad
sida loo galo dhibcaha iyo cabbirrada kaliya ee laga bilaabo kor u qaadidda autocad
Waad isticmaali kartaa barnaamij, iyadoo la raacayo qaabka uu GPS kuu oggolaado. Tusaale ahaan, laga bilaabo gpx ilaa dxf waxaa jira qaabab badan, sida haddii qalabkaagu leeyahay fiilo, waxaad u adeegsan kartaa barnaamijyada sida Mapsource si aad u soo dejiso.
Waa maxay qaabka GPS ee aad leedahay?
Sidee ayaan ugu gudbin karaa gps feejignaan si autocad ah? Qof ayaa i caawin kara?
Pablo, waa inaad ka bedeshaa Geographical ilaa UTM.
En xidhiidhkan waxaad ka heli kartaa template-ka Excel si aad u beddesho.
Waxaan ahay cartoonist waana jeclaan lahaa in aan ogaado .. sidaan ugudbin lahaa isuduwaha juquraafi ee ka jira Madaniga ah si aan u ogaano fogaan.
Waad ku mahadsantihiin iskaashigaaga.
Waad ku mahadsan tahay xiriirka, waxay leeyihiin aalad weyn.
Waxaad isticmaali kartaa lacag la'aan ah ee Autocad [xyzToCAD] for Import & Export Point iyo blocks iyo sidoo kale qarniga miiska duwo (da'ada yar).
+ Faahfaahin iyo gal bogga
Iyadoo nidaamkaan jirin, laakiin waxaa jira qalab Excel oo sidaas sameeya.
james sinisterra isagu wuxuu leeyahay:
mahad aad aad u badan, iga caawiyay waxa muyo inay dajiyaan dhibcood luuqeeyo in autocad laakiin tani waxay I abuuray shaki cusub ma oga haddii ay taasi ii dhig description aan farta isku xigxiga waayo, waan u badan oo aan la garan halka laga bilaabi soo biiray ogolaanaya. waad ku mahadsan tahay iskaashiga aad
Manuel, waxay u egtahay inaadan sameynin taliska talada, maadaama ay boostadu sharraxayso.
Manuel Garcia isagu wuxuu leeyahay:
Good fiidkii, waxaan nidaamka la v13.xls XYZ-dxf, laakiinse anigu uma aan ku xidhi kartaa dhibcaha, AutoCAD ma i garan tixraaca si dhibcood kuwaas, waxaan doonayaa in aan iyagii ku soo wada in ay i dhalin dusha u ahaa dalka, waxaan mahad aad ii soo diri jawaabta aan mail
DANA PAOLA isagu wuxuu leeyahay:
WAXAAN U BAAHAN YAHAY IN LAGU SAMEEYO MADAXWEYNAHA LAGU SAMEEYO OO AY SAMEEYAAN.
Eliswaldo isagu wuxuu leeyahay:
Mahadsanid, waxaan rajeynayaa inaad i caawimi kartid iyo raaligelin ku sameyso adkeysigayga.
Waxaan leeyahay X iyo Y isuduwaha ee Excel, kuwaas oo aan wax dhibaato ah u gudbin kartaa 2008 autocad ilaa waxaa jira ganaax, laakiin su'aasha waa: sidee baan u samayn kartaa autocad ama Civilcad si toos ah ii reconnoitre isuduwaha Excel iyo si toos ah ii soo jiidi geesoolayaasha ah, taas macnaheedu waa in autocad CAD sokeeye ama i dibuejn geesoolayaasha ah oo aan u baahan in aad nuqulka iyo paste wadataa ee line amarka.
Fadlan, waxaan rajeynayaa inaad iga caawin karto inaan sharaxo tallaabo tallaabo tallaabo ah waxaan u baahanahay inaan sameeyo, mahadsanid.
Emailkaygu waa arguello_osw@hotmail.com
Aad u fudud:
1. Waxaad xulataa dhibcooyinka isku midka ah ee ku yaal bogga
2 Nuqul (Ctrl + C)
2 AutoCAD, waxaad ku qortay Pline Command, ka dibna Gali
3 Guji khadka taliska oo dhaji (Ctrl + v)
4 Gal si aad u joojiso amarka.
Tani, mashiinnadaada ayaa la sameyn doonaa marka la eego isla qodobadaas.
ramiro isagu wuxuu leeyahay:
Galab wanaagsan kari iyo dhibcood dejinta luuqeeyo in autocad 2010 tilmaamaha laga bilaabo of blog this si la mid ah waxaan uga hadashay q jiro bushimaha inay soo galaan duwo dhibcood mahad, laakiinse hubaal Halkan Sharax sidoo kale ii adeegi jiray, Su'aashaydu waa kuwan soo socda sidii ay ugu biiri lahaayeen dhibcooyinka ay abuurtay xariiqa?
ayaa ku dhawaaqay barnaamijka GC99 WAX KA QAADASHO KORONTOOYINKA WAXAA LAGA QAADAY
fadlan qof ii sheegi kara sida loo soo dejiyo xyz-dxf freeware
Anigu ma awoodi karo ama ma awoodi karo inaad u soo dirto boostada dubercar@gmail.com Waan ka mahdinayaa wax badan
Joseph isagu wuxuu leeyahay:
Salaan, waxaan doonayaa inaan bedelo isku-duwayaasha nidaamka PSAD56 ee Datum Watix WGS84, sideen u sameeyaa? Salaan
Waxay laga yaabaa in hore sharxay nidaamka oo dhan, laakiin waxaan ahay newbie, oo ayan ku jirin wixii aan u baahan tahay waa hab sahlan in markii ay wadataa x iyo y ka Excel autocad waxay kasoo xiganayaan geesoolayaasha ee 2008.
Maxaa dhacaya waa waxaan ka dhigay isbiriidhshiit ah meesha oo dhan xisaabinta procedimeinto la sameeyaa si loo helo ka wadataa goobada taageero iyo faahfaahinta, hadda doonayaa sidoo kale si toos ah ii soo autocad u dhiganta wadataa ee geesoolayaasha helay.
Waxaan rajeynayaa inaad iga caawin karto, laakiin horey u fiirso fiirsashada, emailkaygu waa arguello_osw@hotmail.com oo waxaan u baahanahay buug buug, mahadsanid.
Hey eegto asxaabta aan hore u dhigan si concatenate xogta amarkayga iyo polyline in AutoCAD laakiin hadda GOS sida ka Exel AutoCAD socday sharaxaad ka mid ah xog kasta q leeyihiin in Exel, eegto isbiriidhshiit aan leeyihiin in ugu horeysay ee ay marayso , kii labaadna wuxuu ahaa waa bari, ee saddexaad galbeed, iyo ugu dambeyntii column this sharaxaad ka mid ah barta. Waxaan hore u dhigan aan dhibcood Exel in CAD auto la amarka on Exel ku concatenated ...... oo haatan doonaya in ay ku qaataan tilmaanta qodob kasta, cq waa amarkii kale oo aad enlasas dhan wadataa una dhig qoraal ku siin meel oo meel wax size font sida in uu yahay in dhammaan c dhigaysa Exel ee marka ay timaado baxay sidii aad mari autocad la amarka polyline iyo tilmaanta kaliya halka ay ku habboon tahay fadlan ku rabeen q i caawi nesesito sida ugu dhakhsaha badan waxaa la dhigayaa haa tahay fadlan .
korsario isagu wuxuu leeyahay:
Hagaaggan qaybtaas ayaa xalliyay dhibkeyga, dhab ahaantii kun jeer, waxaan horay u soo helay foom kale oo leh excel laakiin aad u adag, tani waa mid sahlan, qodobbada badan.
pedro a jaimes s isagu wuxuu leeyahay:
waad mahadsan tihiin inaan ku dhaafi karo dhibco qotodheer si aad u hesho ka dib markaad la tashato
Waxaan ula jeedaa, in AutoCAD waxaa jira hal talis oo dhibic ah, iyo mid kale oo ah dhibco badan.
Sawirka / barta / barta dhowr ah. Kanu waa kan aad la shaqeyso?
Waan ka xumahay, laakiin haddii aad ka akhriyi si fiican u hadal aan aad Ogaan in wax kasta waa in jamac, taas oo macnaheedu yahay inaan la isticmaalayo wax ka badan hal dhibic. maxaad u maleyneysaa
Miyaad isticmaaleysaa dhibco badan?
qof miyuu sharxi karaa shaki iigu jira? waayo, waxaan concatenated wadataa ee Excel, laakiin marka aan isku dayo inaan iyaga paste galay dhibic AutoCAD amarka, kaliya ee iga dhig hal dhibic kaliya, mar dambe, iyo sida ugu badan ee aan isku dayey inaan iyaga oo dhan ma aan samayn karo hal mar, isticmaali AutoCAD 2006.
Miyuu qof ii sharxi karaa hab wanaagsan oo ah in la wadaago dhammaan iskudhafyada laga soo bilaabo koritaanka autocad? Waan ka mahadcelin lahaa wax badan.
JL isagu wuxuu leeyahay:
Hello everybody, mar hore waxaan kuu sheegaa in ay tahay blog wanaagsan oo xiiso leh! Halkan waxaan ka tagayaa wax, oo arag sida ay i caawin karaan ...
Waxaan u baahanahay habab, si aan wax uga bedelo cabbirada ku jira 2D ee Autocad oo wax ka beddeli kara tusaale ahaan warqad sare ama barnaamij kale. Waxaan kaliya u baahanahay in aan wax ka bedelo cabbirka (cabbir kaliya), markaa, dicbujo waxaan haystaa heer jaangooyo iyo waxa aan raadinayo waa in la yareeyo wakhtiga wax ka beddelaya cabir kasta oo ka kooban gabal kasta.
Waxaan rajeynayaa in qof i caawimi karo oo iigu jawaabi karo boggan ama boosteejeyga josem213@gmail.com
cori isagu wuxuu leeyahay:
WAA WAA FARSAMO FARSAMO LEH, WAA INTA AUTOCAD 2009 KU SOO SAARAY SIDII AY U SHAQEEYSAA?, WAA MAXAY UJEEDADA SOO JEEDINTA MACLUUMAADKA? MARKA UGU DANBEEYSO (Sawir / dhibic / dhibco badan) MA SHAQAYN KARO BARNAAMIJKAAN, FADLAN AYAAN U BAAHAN TAHAY, HADDII UU QAADO IN AY I CAAWIN KARA
Waxaan u socdaa Elmer isagu wuxuu leeyahay:
salaan Haddii qof i caawin karo waxaan qabaa dhibaato yar oo la mid ah sida xogta laga soo dejiyo Excel ilaa AutoCAD Haddii qof sifiican ii caawin karo.
Yaa iga caawiya arrimaha soo socda:
Waxaan raacaa habka nuqullada kumbiyuutarada laga soo bilaabo ilaa AutoCAD, si kastaba ha ahaatee, marmarka qaarkood waxay ku tusinayaan oo keliya marka lagu daro 1 PRESENTATION ama 2 PRESENTATION iyo waligeed kuma jirto MODEL. Dhibaatooyinka kale ee uusan u muujineynin mid ka mid ah tabsiyada. Sidee loo saxaa?
Karla isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsan tahay! Waxay igu shaqeysay wax badan! waa mid aad u sharaxan.
marka laguu sheego qodobbada, waxaad riixdaa khadka taliska, ka dibna ku dheji.
ka dibna gaab / cabbir si aad u aragto xogta la soo qaaday
Erick b isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan soo raacay tallaabooyinka ku xusan in ay ku qaataan dhibcood luuqeeyo in autocad oo mar walba i weydiiyaan sheeg barta, waxaan autocad 2010 ma haddii ay jiraan tagaa dhibaatada, oo lagu daray waxaan haystaa 2007 xafiiska iyo anigu ma shaqeyn karaan, waxaan aaminsanahay billabo, laakiin aan waxba ma waxaa lagu sawiray si aad u furto in autocad
carlos bernal isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsan tahay, dukumintiyadaada ayaa aad u faa'iido badan
Shaqada aad u wanaagsan ee la qabtay waa mid caawimaad badan leh waxayna caddeysaa shaki badan
Uma maleynayo inay jirto wax lumis ah
Leopalevi isagu wuxuu leeyahay:
Maxaan sameeyaa markaan soo dejiyo dhibcaha iskudhafyada la qaato gps, waxaan si toos ah ugu beddelaa hal ama dhowr laynood? Ma la samayn karaa qadar qaar?
Sidee baan u dhigi karaa marka marka aan soo dejiyo dhibcaha iskudhafyada la qaato gps, si toos ah ayaan ugu beddelaa xariiq? Ma la samayn karaa qadar qaar?
Hi Richard, oo leh AutoCAD kaliya ma awoodi kartid. Waxaad ku dhexjirtaa nooca sawirka ku jiheeya sawirka ee AutoCAD, kaasoo noqon kara Land ama Civil 3D.
Markaad haysato barnaamijka, halkan waa nidaamka.
RICHARD ZURITA isagu wuxuu leeyahay:
sidee ayaan u soo jiidan karaa dulucda adoo adeegsanaya autocad 2007, waxaan u baahanahay caawinaad, Mr. GALVAREZHN
Si aad u sameyso heerarka Heidel-ka 3D ee Meelaha, nooca caadiga ah ee AutoCAD ma laha shaqeyntaas.
Markaad haysato, halkan waa habka loo soo dejiyo isku-duwayaasha iyo abuurista khadadka konka.
orodo ah isagu wuxuu leeyahay:
Fadlan, waxaan ubaahanahay inaan badbaadiyo inaan isku soo wareejiyo isuduwayaasha iyo isku-duwo jimicsiga si uu u xakameyn karo 2008 oo uu abuuro naqshadaha nicveliga ah.
jorgito isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan rabaa inaad i caawiso sidii aan xal u heli lahaa kuwan soo socda
Waxaan jeclaan lahaa inaan iibsado nidaamka gelitaanka ee 'autocad' exel-kaan, ma jiraan wax si uun ah oo aan qasab ku noqon «»;…. maxaa yeelay markaan qoro qoraallada booska ayaa waxaa cuna cunnada autocad
eratostenes isagu wuxuu leeyahay:
HELLO G! Aan raadinayey mail igu abuuray comments hore oo kale oo ku saabsan georeferencing images in AUTOCAD MAP, si ay u soo diri sawirka laakiinse ma aanan helin ...
Haddii aad haysato koorasyo ​​iyo masaafo, fiirso boostada halkaas oo aad sharaxdo sida loo galo iyaga oo sidoo kale soo bandhigaya shaabad ku yaalla Excel halkaas oo aad ka dhigi karto sahlan.
Waxaan u Baahanahay In La Xaqiijiyo Hantida Waxyaabaha Qodobka Dheeraadka ah
WAXYAABAHA LAGU QAADO MUDDADA SIDA AAD U HELI KARTAA WAXQABADKA DIB U HELI KARAA (DISTANCE AND DEGREES).
WAX KA HELI KARAA MACLUUMAAD
Wanaagsan ma ogi waxa dhici doona, sababtoo ah qoraallada waa in ay tagaan heerka sare.
Haddii wax kastoo uu eberku socdo, hubi inaad adigu dejisid qaabka waraaqda saddexaad ee faylka Excel, in faylka 3D la abuuro.
Isku day inaad sameyso feylka xogta asalka ah ee tusaalaha, oo hubi haddii ay si fiican u shaqeyneyso, si loo arko haddii dhibaatadu noqon karto mid kale.
Quique isagu wuxuu leeyahay:
dhibcaha haddii aad ku dhejisid kootada saxda ah laakiin tirooyinku maaha, haddii qof uu ogyahay inaad ku dhaafi karto waan ku faraxsanahay in aan loola jeedo ...
Hi dhan, isticmaali Hector Excel ku noqotay xogta si autocad si kastaba ha ahaatee soo bixi qodobada gaar ah oo ka mid ah tirada dhibic aan, tiro dhibic oo dhan u Yeela heer dhulka, waxaana rajeynayaa in qof iga caawin kara inaan xaliyo dhibaatadan aan si deg deg ah u leeyihiin in ay Maalinta aan caddaynayo, waxaan idiinka mahad celinayaa ...
Sidee baan u xisaabin karaa xuduudda dhibcooyinka ee la qaadi karo oo lagu maareyn karo autocad? ee loogu talagalay 2007, 2008, 2009
gerpac69 isagu wuxuu leeyahay:
hello aan su'aal waa: sidee ayaan u gudbin qoraalka luuqeeyo in autocad, waxaan u sharxay kiiska guud profile ah sida abscissa kala duwan tusaale ahaan. kasta 20 mitir in hab dhaqanka inaga rabaa in edit kasta 20 mitir qiimaha abscissa ah, waxaa suurto gal ah in la abuuro miis ee Excel iyo AutoCAD u muuqataa at wadataa xy aasaasay laakiin qoraalka baahisey
Waxaad ku sameyn kartaa qaabka xyz-dxf, waxaad ku qori kartaa x, y, z iyo sharaxaadda ka dibna waxaad abuuri kartaa dxf macluumaadka.
Halkan waxaa lagu sharaxay sida loo sameeyo.
Yahny Rodriguez isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ubaahanahay in aan ogaado iyada oo la is waydiinayo isuduwid juquraafi ah iyo cabbir qoto dheer sida aan faahfaahin foomka si aan autocad u arki karo juquraafi ahaan juquraafi ahaan qiimaha qoraalka
Delfino isagu wuxuu leeyahay:
Superguau, waxaan tijaabiyey xaashida Hectorin ii soo dirtay oo run ahaantii ma aanan arag qaabab kale oo fudud, si deg deg ah oo wax ku ool ah si loo bedelo xogta laga bilaabo Excel ilaa Autocad. Thanks Hector
Waxaan ka helayaa maqaalka aad u xiiso badan, waa sahlan oo wax ku ool ah
waa la qiimeeyaa
GRIMA isagu wuxuu leeyahay:
Haa, waan ku faraxsanahay, mahadsanid.
Camilo A isagu wuxuu leeyahay:
si ay u helaan fursad ay ku gaaraan Autocad, isku-dhafka isku-duwidda, iskudubarid iyo galaan.
Haddii aad taqaanid hab aad ku siin karto autocad hab aad ku "aqriso" amarrado badan iyada oo aan digitizerku mid mid u galin, waxaa jiri doona aalad kor u qaadeysa shaqada sawirka autocad.
Waxaan rajeynayaa in aan gudbiyo hab sahlan oo aan uga gudbin karo xogta laga soo bilaabo qorista autocad:
1 oo sarreysa xogta laga qaadey berrinka waxaa loo qaabeeyey salka: sanduuq madow - iskudubarid bari - sanduuq bannaan - iskudubarid waqooyi
2 sanduuqa ugu horeysa waa qodob qoraal ah ama dhibic oo koobi dhibcaha dhibcaha aad haysato
3 sanduuqa labaad waxaa lagu qorey (,) "comma"
4 waxaa lasiiyay ikhtiyaarka "badbaadin sida" iyo halka buuggan tayo sare leh, xulo "qoraalka qaabeysan (ee meeleeyaha laga raray)" oo geli
5 Faylasha loo abuuray kordhinta 'pnr' ayaa lagu furay eray si loo saxo: waa inay ku sii jiraan dhammaan khadadka: POINT 4500,4500
(4500 = QIIMEYN MUHIIM AH) Ogsoonow inaanu jirin boos, kaliya markaad ka dib ..
Sida goorta aad haysatid dhibco badan waa qaali inaad tirtirto meelaha midkiiba, ereyga riix furaha "Ctrl" iyo "B" isku waqti, isla markaana dooro sanduuqa beddelanaya iyo sanduuqa raadinta si aad u dhaqaaqdo mid, laba ama saddex meelood iyo gudaha ku beddelo, ka tag maran
Marar badan ayaa qaabeynta maxalliga ah ee kumbuyuutarku sababayaa in jajab tobanlaha loogu asteeyo comma, markaa amarka beddelashada waa inaad ku beddelataa comma dhibco Comma aan u kala saarayno isku-duwayaasha ayaa loo rogayaa dhibic. Qaab macquul ah oo mar kale loogu beddelo comma ayaa ah in loo qoondeeyo ku beddelashada "laba goobood oo dhibic leh" "comma".
Markaan leenahay faylka wax lagu baddelay iyo xogta qaabkan kor ku xusan, waxaan dooran karnaa "badbaadin sida" oo faylka waxaan u baddeleynaa kordhinta prn ee "SCR" waana aqbalnaa.
Fur autocad iyo nooca sanduuqa wadahadalka barnaamijka amarrada "SCR" waxay na tuseysaa daaqad halkaas oo ay tahay inaan dooranno faylka aan rabno iyo .... DAAWEYNTA DHAQANKA.
Haddii nooca autocad ee loo isticmaalo Isbaanish, hal dariiqo oo lagu sameeyo amarrada lagu yaqaan shaqada nooca Ingiriisiga ah waa in la dhigo kiiska hoose (_) ka hor intaadan ku isticmaalin Isbaanish, ku qor "_SCR"
Iyadoo la raacayo syntax isku mid ah, oo laga soo guuriyey sanaadiiqda wada hadalka markii amar Autocad la bixiyo, dhammaan amarada la malayn karo waa la fulin karaa. Kaliya maahan inay mid mid u qoraan laakiin waa "lagu caddeeyaa fayl ku billowday muuqaal ama si toos ah eray ahaan: autocad wuxuu u aqoonsan yahay meel inay tahay" galo "iyo galo sida" ESC "ama dhammaadka amarka.
Waxaan rajeynayaa inay talooyinkani waxtar leeyihiin, waxaan ahay injineer rayid ah oo waan ogahay in markaan haysto wax ka badan qodobbada 100 inaan qoro, inaan maqli doono qaylada mahadnaqida taas oo runtii ii soo diri doonta
sida oo kale isagu wuxuu leeyahay:
haye! mahadsanid ... maqaal aad u wanaagsan
Fiiri Frank, waxaa jira boosteejo dhammeystiran halka tallaabo tallaabo tallaabo loo sharaxay sida loo abuuro isku-xirnaanta leh AutoCAD isaga oo isku-duwaya.
Tani waa boostada
hello Waxaan u baahanahay inaan ku sawiro kontoroolada qalabka baabuurta sida waa habka ugu fudud ee xog looga helo iskuduweyaasha (laga xulay GPS) hal qeyb iyo kan kale laga soo qaatay theodolite. Waa deg deg ……… .-
Si loo dhajiyo tiirar badan, waxaad isticmaashaa shuruudo isku mid ah, waxay noqon kartaa tusaale ahaan
= QAATAYAASHA (A2, ",", B2,"," C2)
Waxa aan sameeyay waxa weeye in lagu daro xarig kale, oo ka kooban hal jinsi oo dheeraad ah, sidaa daraadeed waxay ku socotaa xigashooyinka iyo ka dibna taxane dheeraad ah in kiiskan noqon lahaa C
markaan soo galo X, Y, Z isku duwo autocad in aan sameeyo si aan u arko isku-duwidda Z, sababtoo ah waxaan soo galay iyaga oo leh caanaha isku-dhafka laakiin waxaan arkayaa oo kaliya X,
Waxaan la yaabanahay inaan haysto garmin gps colorado ah waxaa jira habab aad ufilan oo aad ufilan heerkulkaaga joogtada ah ee joogtada ah ugu yaraan mitirka 2
Shaqo kasta waa in lagu dhisaa taban "moodel", halkaas shaqadu waxay aadeysaa qiyaasta 1: 1 oo u oggolaaneysa dhammaan noocyada hagaajinta.
Taabashooyinka kale ee "soo bandhigid" ama sida loogu yaqaan "layouts" oo af Ingiriis ah ayaa loogu talagalay dhisidda qaban-qaabinta waqtiga daabacaadda cabirkooduna shuruudo ku xiran yahay meelahooda warqadda.
Waan sii waday la shaqeynta xariiqda tallada waxaanan ka helay sawirka soo socda daaqada ugu weyn ee moodel aan la ixtiraamaynin, laakiin tabinta soo bandhigida 1 waxay u egtahay laakiin aad ayey u yar tahay laakiin mid baa sii ballaarineysa waana sawirka dhameystiran laakiin aniga ahaan waxaa fiican inaan ka shaqeeyo Moodeel tab ah waan isku dayi doonaa
Wanaagsan inaad ogaatid in ay shaqeysay, haa, waxay u egtahay mid ka fiican haddii aad isticmaasho polyline.
Amarka qoriga autocad 2008, waa jilicsanaan badan oo aan u malaynaynin sida aan horay u sameeyay, sababtoo ah waxay bixisay talis amar ah, laakiin autocad 2008 waa caan ka dhigan tahay in sawirku soo baxo isla markiiba
Waxaan kugula talineynaa sawirrada muuqaalka si ay u isticmaalaan mashiinka dhulka, waa mid aad u fudud oo dhakhso badan si loo sameeyo shaqo noocan ah marka loo eego autocad ..
Dib-u-eegis nidaamka nidaamka:
xayeysiisyada "polyline", nuqul iskudhafyada, iskuduwaha iskudhafka, geli
ka dibna ku dheji aragti buuxa
Ka faa'ideyso concatenated inay qaataan dhibcood luuqeeyo in autocad 2008, la UTM shaqada isuduwaha cut xogta dakhliga iyo paste aqbalaan laakiin waxaan arki dhibcood waxba ama barbaro ah oo aan waxba yaab inaan dhigay wax AutoCAD si aad ka arki kartaa ama arko, sida tusaale isuduwaha su'aal 408500,1050432 noqon doonaa tiro aad u badan u baahan tahay inaad reserved wax aan u arki kartaa shaashadda of AutoCAD in xisaab xaashi concatenate ah waa mid fudud oo wax ku ool ah oo ay u shaqayso, laakiin waxaan ku weydiin aad u baahan tahay si ay ula qabsadaan wax, aan haddii waa miisaankuna noqon doono in la qiimeeyo qodobbada ama sawirka boosteejada yonibarreto@yahoo.es Waan kugu mahadnaqayaa jawaabta aad i soo diri karto, mahadsanid
Erik isagu wuxuu leeyahay:
Ku salaamayaa dhamaan qof kasta oo ii sheegi kara haddii ay jiraan wax macro ah oo aniga ii ogolaanaya in aan sameeyo dhererka dhirta labadaba dhirta iyo profile waan ku faraxsanahay.
Oscar Garcia isagu wuxuu leeyahay:
Salaan iyo aad u hambalyaynayaa on site this cajiib ah, taas oo noo adeegta kii innagu ma nihin kuwo aad u wanaagsan at sawirka naqshadaha Jooloojiyadda, muuqaalka guud ee dhulka iyo shaqayn lahaa hadii ay jirto hab wax ka mid ah barbaro profiles gaadhya xogta dheecaan dhoofinta luuqeeyo mahad
si aad u aragto, maxaad khaldan tahay.
1 In autoCAD, amarrada dhibcaha badan
2. ee Excel, waxaad dooran kartaa dhibcaha isku-dhafan ee column C, aadna nuqul (ctrl + C)
3 In AutoCAD, khadka taliska waxaad riix ka dibna ku dhejin (Ctrl + V)
Sidii ay ahaan lahaayeen, waxaan isku dayayaa in aan soo dejiyo qodobbo ka soo baxa autocad, mar hore ayaan isku dayay macruufka oo kaliya ayaa u muuqda miiska dhinaca dhibcaha, sidoo kale waxay isku dayeen inay si toos ah ugu qaataan autocad iyo mid, qofna wuu ogyahay
Manuel, haddii aadan weli samayn karin, la soo xiriir boostada
si aan u arko haddii aan ku caawin karo
Edgar Vargas isagu wuxuu leeyahay:
WAXAAD ADIGA, WAA LACAG LA'AAN AH.
Hello, waxaan isku dayey inaan soo dejiyo dhibcaha laga bilaabo Excel ilaa Autocad, ka dib qaabsocodka, laakiin ma soo jiidan karo dhibcaha autocad oo kaliya miiska muraayadda u muuqda, qof ayaa iga caawin kara.
waxaa laga yaabaa in aad sawirto, si toos ah u aragto si aad u aragto haddii la soo bandhigo
Hello, waxaan isku dayey inaan soo dejiyo qodobbada Excel si Autocad ah, iyaga oo raacaya, laakiin ma soo jiidan karo dhibcaha autocad, kaliya miiska ayaa u muuqda, qof ayaa i caawin kara
marianella isagu wuxuu leeyahay:
mahad, waxaan u baahanahay inaan barto wax kasta oo ku saabsan autocad
JORGE ... isagu wuxuu leeyahay:
Hello .. ,, ANIGU WAXAAN AHAY ARDAYGA IYO BARASHADA AUTOCAD THE tambein on aniga ii gaar ah ... oo rabay inuu ogaado qofka aan u horseedi karaa WAX A LONGITUDINAL..EN PROFILE SALDHIGA sahan SITEMA A ,,, kaydka A BIYO SI qaadashada AS THE EMPIENZO ... .GRACIAS
PIGUA isagu wuxuu leeyahay:
hello Waxaan haystaa autocad 2008..in Isbaanish. Waxaan sameeyay qaabka kor lagu soo xusay ... Concatenate ..and waan ka gudubayaa si cad ... wax aan dhicin ......
Hello waxaan ahay arday, oo aan wax ka baranaya qayb aan AUTOCAD ... Waxaan jeclaan lahaa qof i tusi sida aad qabtaan profile a gaadhya ku salaysan NIDAAMKA ah u qaadeen qaab dhismeedka AGUA..DESDE ururinta kaydka ,,, SIDEE waa habka ... SHAQO
hello Oscar, waxaad ku dhigi kartaa meesha aad ku dhufatay autocad si aad u aragto haddii ay jiraan wax qaldan
oscar iyo weres isagu wuxuu leeyahay:
ruxruxo isku dayay la isticmaalayo habka ah in mensionas aan shaqayn, waxaan sameeyo wax kasta oo Excel ka dibna isaga u sheegi multipoint autocad, waxaan nuqul ka ahy Excel iyo waxba dhicin, aan habka loo sameeyaa ma oga haddii ay tahay, maxaa yeelay, waxan u samaynaysaan wax qalad ah.
Waan kuugu mahadcelinayaa caawimadaada
Bruss, si aad u hubiso inay kuu shaqeyneyso, isku day inaad soo gasho xogta wareegsan, tusaale ahaan 680358 iyo 4621773 si aad u ogaatid in dhibcooyinka la qaado. Haddii ay sidaas tahay, ka dibna hubi qaabeynta mashiinkaaga ee mashiinkaaga sababtoo ah jinsiyada kala-soocida kumanaanka iyo dhibcaha jajab tobanlaha
hi Bruss, doorta wax kasta, halkaas oo hal dhibic u socoto, ka dibna soo bandhigay miiska guriga, si loo arko haddii dhibcood oo dhan waa in ay isku meel u socdaan Eetaan ama mid ka mid ah oo kaliya hal dhibic la soo bixi
bruss isagu wuxuu leeyahay:
ee nasiib darrada ah waa tan oo dhan, mar horeba waan diraa, laakiin kaliya waxay u muuqataa hal dhibic kuwa kale ma jiraan wax aan caawin karo,
si fiican u fiican in aad xalliso, laga yaabee inaad sameyso wadooyinka aad isku dayi karto 3D Jid-Qaadaha Jidka.
Aad baad u mahadsantahay ... ... aragtidaada ayaa iga caawisay dhibaatada. Runtii, waxay ahayd korarka, laakiin inkasta oo aan xaliyay, waxaan u arkay in ay aad dhif u tahay sababta oo ah dhibaatadu waxay tahay markii aan sameynayay isu bedelka heerarka, waxaan adeegsaday -0,82 º (tusaale ahaan) goorta ay tahay inaan dhigo -0.82 ... .. Waxaan ku beddelay nidaamka waana taasi (in kastoo aanan jecleyn, sababtuna tahay waxa ay u martay kumanaan qof kala-baxa)
Hase yeeshee, hadda waxaan shaki ka qabaa sida, dhammaan qodobada aan rumaysanahay, iyaga oo u mideeya inay sameeyaan jidka ... .. ma i caawin kartaa? Waad ku mahadsan tahay mar kale.
Waa hagaag haddii aanan garanayn waxa ku dhici doona kombuyuutarka, ka dibna waan sameeyay, wayna soo baxaysaa faylkan, kaas oo aan qiyaaso inuu ku dhow yahay aagga aad ka sameysey sahanka.
Uff .... waxaan tagaa waalan.
Waxaan eegay qaabka gobolka iyo inaan arko in ay sax tahay. Xaqiiqdii, waxaan u maleynayaa in macquulka macquulku uu shaqo fiican qabto sababtoo ah waxaan feylka feylka furay, waxaanan arkayaa in iskudhafka dhibicda si sax ah loo beddelay shahaadooyinka, iwm.
Dhibaatadu waxay timaaddaa markii la furi lahaa kmz-ka g.arth, maadaama ay had iyo jeer ii dirto noocan oo kale ah "weir of damiya jabtay" ee 833968,75 E; 5,41 N ……… .. Waxba ma fahmin.
Waad ku mahadsantihiin xawaare aad uga jawaabto.
Fernando, si aad u hubiso inay kuu shaqeyso, isku day inaad gasho xogta wareega, tusaale ahaan 680358 iyo 4621773 si aad u aragto haddii ay ku dhacaan aagga. Hadday sidaas tahay, ka dib iska hubi qaabeynta gobolka.
Fernando, hubso in qaabeyntaada gobolka (kontoroolka, kontaroolada gobollada) ay sax yihiin, taasoo macnaheedu yahay in kala-guurka kumanaanku yahay dhibic iyo jajab tobanle oo ah jumlad.
sidoo kale hubso inaad dooratid amarka saxda ah, bariiska 680.358,95, waqooyiga 4.621.773,92
Waan baarayaa anigana waxaan ku dhacaa aag dhaqameed si aan ugu dhicin geedka reer Galician
Kaftan… Waa inaanan faa’iido lahayn. Waxa aan rabo inaan sameeyo waxaan u maleynayaa inay fududahay. Waxaan hayaa isku-duwaha UTM ee waddo: 680.358,95 4.621.773,92 wax sidan oo kale ah, dhowr qodob oo isku xiga. (Waxay ku taalaa Villamayor de Gállego- Zaragoza- Spain)
Waxaan isku dayay in aan dhulka google ku daro siyaabo badan, laakiin wax baa dhacaya maxaa yeelay waxaan aaday waqooyiga (badda).
Waxaan isku dayey EØS2GE inay geliso xayndaabyadaas iyo inay geliso XTM 30 iyo waqooyi, waxayna igu tidhi, "Waxaan rabaa inaan xoqo (oo lagu daro ma arko wax dhibco ah ...)
Waxaan soo dejiyey barnaamijka google ee tartanka waxaana isku dayey in aan ku soo galo csv, iyo inaan xitaa wax ka helin sababtoo ah waxay i siisaa qalad ......
Qof ayaa iga caawiya fadlan Waxaan waayay subaxdii oo dhan tan ... :(
Cordenads waxay noqon doontaa psad56, 17s
Waxaan u maleynayaa in ay tahay pigaeccion kale, waxaa jira qnvertirlas? ma jiraan wax barnaamij ah oo loogu talagalay
Waxaan joogaa Peru
Jose, qiimayaasha aad leedahay waa isku-duwayaasha UTM, hubaal, waxa dhaca waa inaad ku mashquulsan tahay inaad ogaato taas datum laga qaatay tusaale ahaan WGS84, NAD27 ama mid kale, inaad ku arki karto qaabeynta nidaamkaaga isku-dubbaridida GPS. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad ogaato aagga aad ku sugan tahay iyo hemisphere, sida aan ku sharaxay gudaha gelintaan markaa waad ogtahay meesha ay isku-duwani ka imaanayaan.
Haddii ay tahay wgs84, waa kan aqbala google, oo leh qalabkan waxaad u beddeli kartaa kariimka kml, kaas oo ah kan isticmaalaya dhulka google.
Saaxiibbada salaan, anigu waxan ku ahay wax cusub, waxaan qabaa su’aal, waxaan dhibco ku hayaa GPS-kayga waxaanan rabaa inaan u gudbiyo Google, tusaale ahaan, hal dhibic waa 0491369 iyo 8475900, waxaan arkay foomamka isbeddelka laakiin qiyamka waxaa lagu bixiyay utm ama juquraafi ahaan iyo xogtayda waxaan u maleynayaa inay yihiin kuwa kuwa cad cad
salaan asxaabta, boggan waa mid aad u wanaagsan
joaquin soto magariño isagu wuxuu leeyahay:
waad ku mahadsantihiin caawinta faa'idada adeegga
Waxaan u maleynayaa appka ugu fiican ee aad isticmaali karto waa tan:
sida loo dhoofiyo iskudhafyada laga soo bilaabo kor u qaadida autocad iyada oo tusaalaheeda tusaale x, y, sharaxaadda
RUUXU WAA IN NOLOSHADA AY KU SAMEEYSAAN INTERNETKA EEBKA KALE OO AY KU SAMEEYAAN XAALADAHA FARSAMADA SHAQADA FARSAMADA
Jordi waa haa, mid ka mid ah raali-gelinta maya.
Calaamadaha Santiago isagu wuxuu leeyahay:
Marka habka loo yaqaan 'galvarezhn uu ku hadlo', miyaad ku dari kartaa sifooyinka dhibcooyinka? Maadaama qoondada iyo lambarka dhibcaha? Su'aal isku mid ah oo ku saabsan mawqifka Jordi. Waad ku mahadsan tahay wax badan
Fikradda aadka u xiiso badan, ayaa aad uga mahadcelineysaa waxtarkaaga, Waxaan raadinayey software si aan u xalliyo tan. Waxaan helay labo, weli ma aan tijaabin, weli ma yaqaanno iyaga? Mid ka mid ah waxaa ku ExcelLink of Xanadu iyo InnerSoft ku Cad kale. Oo iyagu waxay ogaan haddii ay u adeegaan si ay u xaliyaan dhibaatada this iyo sidoo kale sida Jorge Alejandro bandhigi autocad ay barbaro galeen in ay isbedel ku isbiriidhshiit Excel ka dhigi waa la cusboonaysiiyaa?
jorge alejandro isagu wuxuu leeyahay:
fursadaha ina tusaya, waxay yihiin kuwo cad oo sax ah, oo ku dhejiya farsamooyin, hubna waxay yeelan doonaan natiijooyin wanaagsan.
Waxaan rabaa inaan ogaado, haddii ay suurta gal tahay in markii la saxaayo xayeysiiska ugu fiican ama miis, laga soo bilaabo
waa mid aad u wanaagsan, sababtoo ah sababaha qaarkood waa inay isbeddelaan, isku duwid, marka furfuran cad, ayaa la cusbooneysiiyey?
horey u mahadcelisey wax walba
Antonio Abarca Sanchez isagu wuxuu leeyahay:
Dhab ahaantii aad talo waa mid aad u wanaagsan oo u qalantaa for mahad badan oo saaxiibadeena ku mashquulsan yihiin la mid ah oo ka badan la qaban karaa iyadoo TopCal
Rafael Rafael, waxa aad rabto in aad ku sameyso excel waxaa lagu sameeyaa adoo dooranaya unugta, midig guji oo dooranaya qaabka unugyada.
Markaas tabka «geesaha» waxaad ka dooran kartaa dhinacyada qolka aad rabto khadka iyo kan midigta qaabka.
Iyada oo su'aashaada labaad ... Waxaan iska daayaa, ma aanan isticmaalin maxaa yeelay waa arrin aad u dhib badan.
Rafael Aranguren isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ubaahanahay in aan awood u yeesho in aan bedelo hababka xariijinta ee kuwa kale ee aan ahayn kuwa sare ee ii soo bandhigaya iyaga oo doortay qaabka unugyada. sida loo helo wax aan ka ahayn kuwa kor ku xusan! mahad
Waxaan ku jiraa gacmahaaga!
Waxaan hayaa su'aal kale oo waxaan haystaa shabakad maxalli ah oo leh kombiyuutarrada 50 dhammaantoodna waxay leeyihiin IP ay gacanta ku hayaan aniga iyo wax kasta oo kaamil ah laakiin waxaan haystaa labo "LAPTOPS" oo leh daaqado vista ah oo marka ay xiraan fiilada korantada ay ku qaataan guriga, marwalba waxay luminayaan ip manual waana inaan maalin walba dib u dhigaa. Tani waxay igu kicisay waalli.
Waad mahadsantihiin oo aad u mahadsantahay kaalmadaada !!
Hello José, hadii aad tahay mid gaar ah, waxaan ku caawin karnaa ... inaad rabto in aad nuqul ka qaadato, sanduuq qalafsan ama xog ku saabsan bararka amarka?
Bogga aadka u xiiso badan
Hello, qof ayaa ii sheegi kara sida loo geliyo qoraallada laga soo qaado bogga sare ee loo yaqaan "Autocad".
Salaan Roberto, aynu eegno haddii aan fahmo su'aashaada.
Haddii waxa aad doonayso uu yahay barnaamij aad si otomaatig ah ugu beddeli karto shey la-baadhay oo loo yaqaan 'vector', laga yaabee inay tahay faa iidooyin badan oo microstation ah, ama AutoCAD Raster Design. Kuwan waxaad la xiriiri kartaa canaasiin si-otomaatik ah oo leh noocyo astaamo ah sida qaloocyo, cabbirid, qoraal, wareegyo, qaabab, xariiqyo ... iyo nidaamku wuxuu u rogayaa vector inkasta oo tani ay tahay iskaankaan waa inuu noqdaa mid tayo fiican leh.
Haddii aad sameyneyso waa sawirka sawirka, ugu haboon yahay microstation ama autocad, waxaad kaliya abuureysaa heerarka, siin midabka, nooca xariijinta ama style line, ka dibna dhaqaajiya heerka uu ku shaqeyn karo iyo raad.
Aad baad ugu mahadsantahay caawinta aad siisay, waxaan qabanayaa mashruuc shidaal qaadis ah waxaanan haystaa diyaarad lafahamay waxaanan rabaa in aan qodisto oo aan u badalo qaab DWG oo aan kala saari karo lakab walba oo diyaaradda ah sida (kontoroolada, wadooyinka wabiga, iwm.) maxaa yeelay diyaaraddaas waa inaan sawiraa shabakadaha korantada, waxaana lagu daaweeyaa TraceArt, Win Topo, Illustrator cs2 mana lihi natiijooyin wanaagsan ama malaha anigu uma aanan qaban sidii ay ahaan lahaayeen, maxaa yeelay hadda uun baan bilaabay. Aad baad u mahadsantahay
Thanks Jordi, waan iskudayay waana sifiican Waxaan ku faraxsanahay inaan soo toosay kuwii horey ula halgamay maanta
jordiTGN isagu wuxuu leeyahay:
Macro oo faallo ka bixiyay boostada hore waxaad ka soo dejisan kartaa bogag badan (eg. http://www.mecinca.net/software.html, XYZ-DXF), oo barnaamijkii Manuel Anguita ITT Juan ku Ordóñez, Jaen (Kaysar waxa Kaysar).
Tusaale ahaan, waxaan u isticmaalaa dabaqa si aan u bilaabo sawirada sahan ee qorshaynta. Ma kugula talineyno in lagu daro codadka si 'loo raaco' Autocad (inkasta oo xaashidu ay cadahay in ay tahay in la galo, ma aha mid lagama maarmaan ah), laakiin taasi horay u tagtay qof walba dhadhankiisa.
Macro waa mid fudud oo aad u awood badan. Marka hore, iyo inkasta oo ay u muuqan karto iskaashi, hubi inaad haysato makarro aad u firfircoon.
Waraaqda ugu horeysa (midka kuugu muuqda marka aad furan tahay makar) waxaad ka heli doontaa tabarka COORDINATES. Maadaama aysan noqon karin mid kale, tani waa meesha aan ka dhigi doono dhibcaha dhibcaha iyo isuduwaha X, Y, Z. Waxaan xusuustaa in haddii X iyo Y lagu soo galo oo kaliya, macro wuxuu abuuraa cabbirada 0 mid kasta oo ka mid ah qodobada si toos ah loo soo geliyey.
Qeybta labaad, PREVISUALIZATION, gujinta Dib-u-eegida Jawaab-celinta waxaan heli doonaa falanqeyn leh daruuraha dhibcooyinka si loo abuuro.
Ugu dambeyntii, on tab Options ah, aan soo bandhigno oo xuduudaheedu sida height text in dhibic rotulacion CAD, haddii aan rabno in barta ahbaa in 3D ama 2D iyo haddii ay isku dhibcaha ah ee ama aan tusay. Waxaan ka faalloonayaa sanduuqa si aad u geliso filename, si toos ah wadada halka * .dxf la soo saarayo waa C: \_. Kaliya 'Riix' si aad u abuurto dxf '
Si fudud u soo dhoofi * .dxf CAD kasta.
PS: Hectorin, sida xaqiiqada ah waxaan isku raaceen in si deg deg ah Dhaqale dheeraad ah ka shaqeeyaa ka badan xalka la soo jeediyey by galvarezhn, laakiin waxaa muhiim ah in aan la iloobin in aan qaatay saacado la barasantigareeyaan iyo in, bartey, awood u leeyihiin in ay ' isugeyn 'khariidad-xisaabeed si loo sameeyo wax ka badan iskugeynta iyo kala-jajabintu waa wax aad ku xisaabtami karto, waana in uu yaqaano farsamoyaqaan ka shaqeeya beertayada. Inkasta oo ay hoos u dhacdo, habkani wuxuu u muuqdaa mid xiiso leh haddii aysan jirin wax 'cawinaad' ah nooca macriga kor ku xusan.
Thanks Hectorin, Waxaan isticmaalay habkan si aan uga jawaabo su'aasha iga timid, laakiin meeshan waxay u adeegtaa si ay u muujiso xalal kale.
Hectorin isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan haystaa faylal sare oo ka kooban mowjin u diraya isku-duwayaasha si ay u xakameystaan ​​magaca barta iyo lambarka haddii loo baahdo, way ka fiican tahay habkaada .. haddii qof doonayo inuu u diro boostada hectorgh65@hotmail.com
Waxaan u arkaa inay aad u xiiso badan tahay oo ay fududahay in la mahadiyo
Thanks Jordi, waxaan fiirin doonaa oo faallo ka bixin doonaa.
Waxaan u arkaa in ay aad u xiiso badan kaalin aad u soo jeedin, maxaa yeelay waxa ay muujinaysaa in aynaan 'siiyo' walba barnaamijyo yar ama macros, halka garashada in mararka qaar nolosheena :-) fudud ka dhigi.
Anyway, waxaa jira Dhaqale yar Excel, oo ku saabsan kb 400, taas oo kuu ogolaanaysaa inaad sameeyo wuxuu leeyahay, Waxaan si shakhsi ah u arkaan in ay cajiib ah. Waxaa la yiraahdaa XYZ-DXF, waxaadna u soo dejisan kartaa lacag la'aan (waa freeware) haddii aad eegto.
Waa hab kale oo loo sameeyo